Amisom oo Muqdisho suxufi ku dhaawacday | KEYDMEDIA ONLINE
Amisom oo Muqdisho suxufi ku dhaawacday
Muqdisho(Keydmedia) Ciidamada Amisom oo tan iyo markii ay yimaadeen Magaalada Muqdisho ay aad u sii kordhayeen marba marka ka danbeysa dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliyeed u geysanayaan ayaa casir liiqii shalay rasaas ay fureen waxaa ku dhawaacamay wariye ka mid wariyaasha Muqdisho.
Liibaan Cabdi Cadow oo ah Suxufi ka tiran Idaacada SIMBA ee Magaalada Muqdisho ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada ku fureen shacab ku lugeynayay inta u dhaxeysa Isbitaalka Digfeer iyo Kuliyadda Jaala Siyaad ee Magaalada Muqdisho.
"Waxaan ka soo rawaxay shaqadeyda waxaana ku soo jeeday Gurigeyga, laakiin wadada ayeey xireen Ciidamada AMISOM kadib ayaan bilownay in aan soo lugeyno aniga iyo wariye Max'ed Amiin oo ka tirsan Idaacada Danan waxaana na wehliyay shacab laakiin waxaa dhacay wax aanan fileyn, taasoo aheyd markii ay Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ay rasaas na huwiyeen, waxaana ku dhaawacmay Sinta sida aad aragto" Sidaa waxaa Keydmedia mar ay Gurigiisa ku booqatay u sheegay wariye Liibaan Cabdi Cadow.
Wariyahan ku dhaawacmay rasaasta AMISOM ayaa waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ku dhaawacmay dhacadadii xanuunka badneyd ee Hotel Shamow ka dhacday Sanadkii 2009 Bishii December 3-deedii xiligaasoo Liibaan uu lugta dhaawac fudud ka gaaray.
"Waxaan la soo shaqeeyay Idaacado badan oo ku yaala Muqdisho, waxaana hadda aan diyaar u ahay sii wadida howsheyda warbaahineed" ayuu yiri Liibaan oo Jiifa gurigiisa isla markaana ay ka muuqatay dhibaatada ay gaarsiiyay xabadda.
Suxufigan dhaawaca uu gaaray waa 22-sano jir , waxaana uu ka mid yahay dhalinayarada xiligan adag u bareertay ka shaqeynta warbaahinta Soomaaliya, iyadoona ay jiraan duruufo aad u adag oo ay la kulmaan bahda Saxaafada.
24-kii Bishan ayeey aheyd markii rasaas wiifta ah oo ka mid aheyd xabado ay isu adeegsanayeen dhinacdayada ku dagaalamaya Magaalada Muqdisho ay dishay wariye Barqad Cawaale Aadan oo ahaa rog cadaa saxaafadeed oo mudo ka badan 30 sano ku soo jiray howsha Warbaahinta Soomaaliya.